You are here: Home somal Wasaaradda Ciyaaraha Oo Ka Hor Istaagtay Xildhibaan Dogox Garoon Si Sharci Darro Ah Uu Ku Seestay
kaas oo uu si sharci darro ah birrihii garoonka uga furtay seesna ku wareejistay xildhibaan Saleebaan Dogox oo ka mid ah gollaha deegaanka Hargeysa.
Wasiirka dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Md. Cabdilaahi Faarax Maydhane oo ay weheliyaan Wasiir xigeenkiisa, Agaasimaha guud, Agaasime waaxeedyadda wasaaradda iyo kooxaha heerarka labaad iyo saddexaad ee ka dhisan degmadda Axmed ayaa subaxnimaddii hore ee saaka tegay garoonkaas si ay dib ugu celiyaan birrihii, sidoo kalena u calaamadiyaan cabirka garoonka oo si looga hir-geliyo dhimse garoon.
Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Md. Cabdilaahi Faarax Maydhane ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana uu tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay in xildhibaankii degmaddii laga soo doortay uu dhaco garoomadii ciyaalku ku ciyaari lahaayeen “Waxaan ku baaqaya cid kasta inay arkaan xildhibaanadii caasimadda loo soo doortay inay boob ku hayaan dadkoodii, weliba ay ka xishoon waayeen goobihii ay dhallinyartu ku ciyaari lahayd. Annigu wiil aan dhalay uma dhicinayo garoonkan, ee waxaan u dhicinayaan dhallinyarada, gaar ahaan reer Axmed Dhagax oo xildhibaankii laga soo doortay ayaan weliba uga difaacaynaa inuu boobo” ayuu hadalkiisi ku soo koobay.
Ugu dambeyntii Wasiir xigeenka ciyaaraha Md. Cabdirashiid Ismaaciil Faarax ayaa qalab ciyaareed guddoonsiiyey kooxihii ku sugnaa garoonka, iyaga oo ay halkaasi ka hadleen qaar ka mid ah ciyaartoygii kooxaha, waxaanay hoosta ka xariiqeen inay difaacan doonaan garoonkooda waxaana ay sidoo kale burburiyeen seeskii uu ku wareejiyay xildhibaan Dogox.